Mitemo nemitemo | Sandwende Pebble Tours
MITEMO YOKUTANGA NEMAGWARO
Zvose zvinowanikwa muRupe Rupee.
GST 5% inoshandiswa pamutengo wemari.
Vatenzi vanokumbirwa kuti vawane motokari inoongororwa ivo pachavo vasati vashandise. Vanokumbirwawo kuchengetedza zvinhu zvavo pachedu. Isu hatitarisiri chero basa rekurasikirwa.
Kana mhando yemotokari maererano nechikumbiro chekushandisa isiripo nokuda kwezvikonzero zvisingafanoonekwi, imwe yemotokari inofanira kupiwa kune muenzi.
Kuona-kuona kunofanana nekufambisa chete pamigwagwa inokwanisa.
Mutyairi angave asina kumanikidzirwa kutyaira nepamhanho yakakwirira kudarika kusungirwa pasi peIndia Motor Vehicle Act.Kuda kukumbirwa kurega kutora nguva yekufamba usiku.
Nokuda kwekanakisisa kweVashanyi, Sand Pebbles Tours vachagadzirira kubhadhara mari yekufambisa / Kutora mitero uye Mutemo weZvibvumirano zveNyika-yeBorder Mitero ichadzorerwa neMuenzi kune mutyairi pakushambadzirwa kweRipoteri pakapera basa.
Pamabasa emunharaunda, Chauffeur's Night Allowance ichapiwa mhosva pakati pe22.00 Hrs kusvika 06.00 Hrs. Zvimwe zvikwereti zvose zvinowedzera kubhadharwa kwaari mumari panguva yekushandiswa.
Paunenge uchifambisa mumigwagwa yeGhat, Air-Conditioning icharamba ichidzimwa.
Kuti urege kudzivirira mhirizhonga nezvimwe zvinhu zvisingatarisirwi zvinogona kukonzera kunonoka, chiziviso chakakwana chinofanira kupiwa kwekufambisa.
Rwendo-Mashizha rinotarisirwa kuti risayinwe nemushandisi kuratidza kushandiswa. Kupfuurira kwekunyunyuta hakubvumirwi.
Vashanyi vanokumbirwa kuti vaongorore mararamiro edu uye kushanda uye kuzadza "Formback" fomu kuti iiswe kwavari neMotokari, Izvi zvichatibatsira kushumira iwe zviri nani.
Mari iyo ichasimudzwa pane Client / Guest kunze kwekunge zvataurwa zvakanyorwa. Nzira yekubhadhara inofanira kunyatsorayirwa panguva yekubhuka.
Zvikwereti zvichataurwa kuZvondo mbiri. Dombo reMatombo rinobvumira mazuva akawanda e-15 chikwereti kubva pazuva rekugamuchira Bhiri pakugadziriswa kweSivumelwano. Kuwedzera kweCredit Time Sand Pebbles kunogona kukumbirwa nekunyora zvishoma mukati maawa 48 ekugamuchira mutero.
Iyi Tariff iri pamusoro apa inotarisana nekukwirirana kwakatarwa kana chiitiko chekukwira pamari yeFael kana Govt. Mitero yezvikwereti.
Kukwidzwa kwemotokari kuBhubaneswar kunonyatsosvika pakuziva kweSandra Pebbles.
Maripo inogona kugadziriswa nemari kana nea / c payee Chengeta / DD / PO inotorwa mukufarira "Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd."Maripo inogona kugadziriswa neKodhadhi / RTGS kana NEFT (Kubhadhara nekadhi rechikwereti kuchaita kuti 3% inowedzera).
Kuti ugadzirise kuburikidza neMaridhi yeKadhi, Kadhi Nemazuva uye Zuva Rokupera rinofanira kutumirwa / Faxed panguva yekutora. Kana zvikwereti zvichinyadziswa, kubhadhara Client / Mutevedzeri inofanira kuzadza nemari.
Kana chikwereti chikagadziriswa kuburikidza ne RTGS / NEFT, Sand Pebbles inofanira kukurudzirwa nezvemashoko.
Kana zvichida kugadziriswa kweRs.25000.- kana kupfuura, kopi yePAN kadi ye Client / Guest inofanira kupiwa.
Mhirizhonga yose inotungamirirwa nehurumende yeBhubaneswar pamutemo chete.